မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်နေကြတဲ့ ကိုးကွယ်မှု အယူအဆအလွဲများ
မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်နေကြတဲ့ ကိုးကွယ်မှု အယူအဆအလွဲများ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ (၁) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို မျက်မှန်တပ်ပေးထားတဲ့အယူလွဲ logic… မဟာသက္ကရာဇ် ၂၅၀မှာ သရေခေတ္တရာမင်းဆက် ဒွတ္တဘောင်မင်းကြီးနဲ့ ပိဿနိုးမိဘုရား စန္ဒာဒေဝီမိဘုရားတို့ တည်ထား ခဲ့တယ်။ ပိဿနိုးမိဘုရားရဲ့ အိပ်မက်အရတည်ထားခဲ့တာဆိုပဲ။ ဒွတ္တဘောင်မင်း မျက်လုံးကန်းတော့ အဲ့ဒီဘုရားကြီးကို မှန်တစ်ချပ်ပူဇော်တယ် ။ ပြန်ကောင်းတယ်လို့ ပါးစပ်ရာဇဝင်ကြားဖူးတယ်။ ( ရွှေမျက်မှန်ဘုရားမှာ ဒွတ္ထဘောင် ကျောက်စာ မရှိလို့ ပါးစပ်ရာဇဝင်လို့သုံးလိုက်တာ )အဲ့ခေတ်က မျက်မှန်မရှိနိုင်လောက်ဖူး ။ ရိုးရိုးမှန်နေ မှာပါ။ ခေတ်တွေ အလီလီ ပြောင်းပြီး ၂၁ရာစုအရောက်မှာ ရွှေအလေးချိန် ၃၉ ကျပ်သားရှိတဲ့ မျက်မှန်တော်ကြီး ဆက်ကပ်ပူဇော်ခဲ့ကြတာပေါ့။ (ဘုရား သမိုင်းရေးတာမဟုတ်လို့ …
စွမ်းအားရှင်တစ်ဦး၏ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် ( ၁ )
စွမ်းအားရှင်တစ်ဦး၏ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် ( ၁ ) ရေးသူ – ခက်ဇော် Ref , Real Lives Real Stories မဂ္ဂဇင်း။ ၂၀၁၉။ ဇူလိုင် ညနေ ၄နာရီ ကျော်ပြီဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန်၏ မတ်လအပူရှိန်ကား သိသိသာသာ ကျမသွား။ ။ မြို့တော်ခန်းမအရှေ့တွင် ခွပ်ဒေါင်းအလံများကိုင်ကာ မတ်တတ်ရပ် ဆန္ဒပြနေကြသည့် ကျောင်းသား ပြည်သူတစ်စုရှိနေသည်။ သူတို့ရှေ့တူရှုတွင် တင်းမာခက်ထန်သည့် မျက်နှာထားဖြင့် ရပ်နေကြသည့် လူတစ်စုရှိနေပြီး ထိုလူစု နောက်တွင်ကား တုတ်ဒိုင်း ယူနီဖောင်းများ အပြည့်အစုံဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အသင့်နေရာယူလျက်။ ။ ထိုလူစု၏ မျက်နှာတို့ကား ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ခက်ထန်နေကြပြီး အသက် ၅၀မှ အသက်၁၃နှစ်အထိ …
(၂ဝ၂ဝ)ပြည့်ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း
(၂ဝ၂ဝ)ပြည့်ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီများအတွက် တစ်နှစ်စာဟောစာတမ်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးဖွားသူများက ဤနှစ် သူတစ်ပါးကို အားကိုး၍ မရသော နှစ်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်သူများတကာထက်ပို၍ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သော စွမ်းအားရှင်များဖြစ်နိုင်သလို့ အရာရာကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါမှအဆင်ပြေလာမည်။ မိမိအတွက်အကျိူး ဖြစ်ထွန်းသည့် အခွင်အလမ်း၊အလုပ်အကိုင်များပါ ရရှိမည် ..။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများယခုနှစ်တွင်ရှေ့ပိုင်း(၆)လတွင်နေရာသစ်၊ဝန်းကျင်သစ်များသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ရတတ်သည်။ စီးပွားအရှိန်အဟုန်နှင့် တက်ကာ အိမ်ပိုင်၊ကားပိုင်ဖြစ်သွားတက်၏။ မထင်မှတ်ထားသောခရီးများ၊မရည်ရွယ်သောခရီးများ သွားရတတ်၏။ လူမျိုးခြားကူညီခြင်းနိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သတ်သော ကိစ္စများအောင်မြင်ခြင်းများကြုံရမည်ဖြစ်၏။ လူမျိုးကွဲ လူမျိုးခြားအကျိုးပေးမည်။ဝန်ထမ်းဆိုလျှင် ရာထူးတက်ခြင်း၊ အခြေအနေ မြင့်တက်ခြင်း ကြုံရလိမ့်မည် ဖြစ်၏ …။ နောက် ၆လတွေ့မှာ သားသမီးလက်အောက်ငယ်သားနှင့်ပက်သတ်ပြီး စိတ်ညစ်စရာ ကြုံရမည်။ငွေဒလဟော ထွက်ခြင်း၊ငွေအတွက်ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရမည်။ စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ်၏။ ပတ်ဝန်းကျင်မှမိမိအား ပြစ်တင်တင်ဝေဖန် …
လူမျိုးစွဲမထားကြရန်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချကြရန် အောင်လအန်ဆန် တိုက်တွန်း
လူမျိုးစွဲမထားကြရန်နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချကြရန် အောင်လအန်ဆန် တိုက်တွန်း လူမျိုးစွဲမထားဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချကြဖို့ ONE Championship ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်က တိုက်တွန်း လိုက် ပါ တယ် ။ One Championship မစ်ဒယ်ဝိတ်နဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသား တီရယ်ထန်းနဲ့ ဗီယက်နမ်ကစားသမား မာတင်ငုရင်တို့ဟာ မလေးရှားရောက် ကချင်နဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား လူငယ်တွေ၊ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမှာရှိတဲ့ APW Bangsar ခန်းမမှာ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုခဲ့ တာပါ ။ ဒီပွဲကို ကချင်နဲ့ ချင်း လူမှု အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း …
အသားဖြူလိုသူတွေအတွက် (၇) ရက်အတွင်း အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ….
အသားဖြူလိုသူတွေအတွက် (၇) ရက်အတွင်း အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ…. မိန်းကလေး တော်တော်များများကတော့ အသားဖြူချင်ကြမှာပါ။ မိန်းလေးတွေဟာ သူတို့အသားရေကို တန်ဖိုးထားကြပြီး၊ ဖြစ်နိုင်သမျှ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် နေလိုကြပါတယ်။ အခု D Nae Khit ကနေ ဖော်ပြပေးချင်တာကတော့ ပျိုမေတွေအတွက် (၇)ရက်အတွင်း အသားဖြူစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ (1) နွားနို့အစိမ်း နွားနို့အစိမ်းမှာ အသားအရေကို ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ နွားနို့ကို ကမ္ဘာကျော် အလှဘုရင်မကြီး ကလီယိုပက်ထရာတောင် သုံးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမကတော့ နွားနို့ကန်ထဲမှာ စိမ်တာပါတဲ့။ အခုလည်း နွားနို့ကို Pack ပုံစံမျိုး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပုံမှန်လိမ်းပေးပါ။ နေ့စဉ် ရေမချိုးခင် လိမ်းပြီး …
ချစ်သူကို အသည်းနင့်အောင် ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ (၅) မျိုး …
ချစ်သူကို အသည်းနင့်အောင် ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ (၅) မျိုး … မိန်းကလေးတွေထဲမှာ ချစ်သူရဲ့ အသည်းနင့်အောင် အချစ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ ကံအကောင်းဆုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို အသည်းနင့်အောင်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လားဆိုတာ ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူနဲ့ ဒီအချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်တာ့ သင့်ကို သင့်ချစ်သူက အသည်းနင့်အောင် ချစ်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါတော့…. (၁) အမြဲအလိုလိုက်တယ် ” သင့်ချစ်သူဟာ သင်ပြောတဲ့ အရာတိုင်းကို လက်ခံပြီး သင်တောင်းဆိုသမျှကို အလိုလိုက်မှာပါ။ သင်ဖြစ်စေချင်တာတွေအကုန် လုပ်ပေးပြီး ကိစ္စတော်တော်များများမှာ သင့်ရဲ့ သဘောထားတွေကို ရှေ့တန်းတင်မယ့် သူမျိုြး်ဖစ်ပါတယ်။ သင့်မျက်နှာညှိုးမှာထက်စာရင် သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေကို ချိုးနှိမ်ထားတတ်တဲ့ သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ကို အသည်းနင့်အောင်ချစ်လို့ …
“နိုင်ငံတကာမှ ပန်းလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေနွေး ခဲ့တဲ့ လွင်မိုး”
ရုပ်ရှင်လောကမှာ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်မှုတွေများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး လွင်မိုးကတော့ ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။လက်ရှိမှာတော့ ဟော်လန်၊အီရန်၊အင်ဒိုနီရှား၊သီရိလင်္ကာ၊ကိုရီယား စသည့်နိုင်ငံတကာမှ ပန်းလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “Holland, Iran, Indonesia, Philippine, Sri Lanka, Korea,နိုင်ငံတကာမှ ပန်းလုပ်ငန်း ရှင်များ The Florist By Yun ပန်းစိုက်ခင်းအားလေ့လာပြီး တွေ့ဆုံဆွေနွေး ခဲ့ကြ” လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူကတော့ မှားတာကို မှားတဲ့အတိုင်းဝေဖန်ထောက်ရူပြတတ်လို့ ပရိသတ်တွေက အချစ်တွေပိုနေတဲ့ မင်းသားကြီးက ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပီပီ သူစိမ်းအိမ်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကို …
စနေ သားသမီးတို့အတွက် ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း
စနေ သားသမီးတို့အတွက် ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း ဒီလအတွင်းမှာ မိမိ၏ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးနဲ့ပက်သက်ပြီး အပူများတက်ပါသည်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်တာ၊ ရာထူးတက် သလိုမျိုးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ် …။ လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင် မွမ်းမံရတာတွေ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျောက်တတ် ပါတယ် …။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်လာတတ်တယ်။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်သဘောကြီးစွာ ကွဲတတ်ပါတယ် …။ ကြီးကဲသူများ နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာလည်း စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ မတင်မကျ အခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆင်ပြေသွားမယ် …။ ကွဲကွာနေတဲ့ …
အလုပ်ခွင်ကြောင့် ပင်ပန်းနေတဲ့ ဦးနှောက်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လန်းဆန်း စေမယ့် အိမ်တွင်း ဆေးစွမ်းကောင်း
အလုပ်ခွင်ကြောင့် ပင်ပန်းနေတဲ့ ဦးနှောက်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လန်းဆန်း စေမယ့် အိမ်တွင်း ဆေးစွမ်းကောင်း တစ်နေ့ တစ်နေ့ မရပ်မနား အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ကိုယ်တွေ ဦးနှောက်လေးလည်း သိပ်သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်နော်..။ ကျောင်းစာတွေ အလုပ်တွေကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ဦးနှောက်တွေ ထိုင်းမှိုင်းပြီး စိတ်ညစ်ညူးကြတယ် အချိန်တွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ် မလား။ အဲ့လိုအချိန်တွေဆို ဘာမှမလုပ်ချင်ပဲ လူက ငြီးစီစီနဲ့ နုန်းခွေ နေတတ်ကြပါတယ် …။ အဲ့ဒါကို ပျောက်ဖို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းကြလေ့ ရှိပါတယ်။ သီချင်းဆိုတာ၊ အပြင်သွားတာ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ထက် လွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်တဲ့ ဆေးနည်းကောင်း တစ်ခု ရှိပါတယ် …။ဆေးနည်းကတော့ လုပ်ရတာ လွယ်ကူ …
” ပိုက်ဆံအကြွေး ရစရာရှိတဲ့သူတွေ တောင်းစရာမလိုပဲ ပြန်လာပေးစေတဲ့ နည်း ”
” ပိုက်ဆံအကြွေး ရစရာရှိတဲ့သူတွေ တောင်းစရာမလိုပဲ ပြန်လာပေးစေတဲ့ နည်း “ ပိုက်ဆံ အကြွေး ရစရာရှိတဲ့သူတွေ တောင်းစရာမလိုပဲ ပြန်လာပေးစေတဲ့နည်း ပိုက်ဆံ အကြွေး အမြန်ပြန်လာ ဆပ်ရန် ယတြာ အစီအရင်လေးပါ …။ မိမိပိုက်ဆံမိမိပြန်မရ၍စိတ်ညစ်နေသူများ ပိုက်ဆံချေးပြီးပြန်လာမဆပ် နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့လုပ်နေ သူများ အကြွေးလည်းမဆပ် မိမိကိုရှောင်တိမ်းနေသူများအမြန်ဆုံးအကြွေးလာပေးရန် ဤယတြာကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ် …။ ပြုလုပ်ပုံကတော့…. – စာရွက် တစ်ရွက်တွင် ပိုက်ဆံ အကြွေး လာမဆပ် သူများ နာမည် များကို ရေးလိုက်ပါ …။ – ထိုစာရွက်ပေါ်တွင် ကြွေပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်တင် လိုက်ပါ …။ – ကြွေပန်းကန်ပြား တွင် နို့ဆီဘူး …
This Year : 276318
Total Users : 571451
Views Today : 5737
Total views : 2638884